ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံး၏ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်အတွက်ရုရှားဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ 51 51 ဆောင်းပါးအဘယ်သူ၏စက်ဝိုင်းရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏ပညတ္အားဖြင့် delineated ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကိုယ်သူတို့စှပျစှဲဖို့မလက်ျာ, သူတို့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းများ, ပေးသည်ကိုဆိုလို၏။ ရာဇသတ်ကြီး§ 51 ။ ကန့်သတ် ...
ရုရှားမှာရွေးကောက်ပွဲအပေါ်လေ့လာသူများ၏တာဝန်နှင့်အခွင့်အရေးများဘာတွေလဲ? Watch ။ ။ သင့်ရဲ့နှာခေါင်း ... .. မဲဆန္ဒရှင်တွေလေ့လာသူဖြစ်နိုင်သည် Pick: မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းနှင့်အတူ -znakomitsya; အဲဒါကိုသက်ဆိုင်ရာရွေးကောက်ပွဲများ၏မဲရုံထဲမှာနေရာချစကာ ...
လျော်ကြေး - ဤဝေါဟာရ၏အဓိပ္ပါယ်ကိုဥပဒေသိပ္ပံတွင်; ငွေသားလျော်ကြေး၊ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအတွက်လျော်ကြေး၊ အသုံးမပြုသောအခွင့်အရေးအတွက်လုပ်ခ၊ ကြွေးရှင်နှင့်ကြွေးရှင်၏တန်ပြန်တောင်းဆိုမှုများကိုထိမ်းသိမ်းခြင်းအားဖြင့်တာဝန်ဝတ္တရားများကိုပြန်ဆပ်နည်း။ ငွေသားနှင့်တစ်လတစ်ကြိမ်ထုတ်ပေးငွေများ ...
ရုရှားသည်ယူအက်စ်ယူအက်စ်၏ဆက်ခံသူဖြစ်ကြောင်းအဘယ်စာရွက်စာတမ်းကဆိုသည်။ ၁၉၉၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့တွင်ရုရှားနိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီးဌာနသည်မော်စကိုရှိသံတမန်ရေးရာဌာနအကြီးအကဲများအားရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းမှဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်နေကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏သီးသန့်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်၏ဘာသာရပ်ကိုရည်ညွှန်း? သခင်, သခင်, သင်လိမ္မာပါးနပ်သောအရာကို ... ကောင်းပြီဒါစာအုပ်ရရန်ခက်ခဲများနှင့်ရုရှားဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအပေါ်တစ်ဦးတစ်ဆယ်ပျက်စီး? ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၏ဆောင်းပါး 71 ...
အစိုးရရာထူးများနှင့်ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများအကြောင်း။ အများပြည်သူဆိုင်ရာရာထူးကိုထမ်းဆောင်နေစဉ်အစိုးရ ၀ န်ထမ်းသည်နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်ပါ။ "အပိုဒ် 3. ပြည်နယ်လူထုအခြေပြု ...
ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာဥပဒေ၊ ယင်း၏အကြောင်းအရာနှင့်ရင်းမြစ်များ။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာဥပဒေဆိုသည်မှာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ပြည်နယ်အာဏာကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများပြexerc္ဌာန်းသောဥပဒေဌာနတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ထိုအာဏာကိုကျင့်သုံးသောအဓိကပုံစံများ၊ နိုင်ငံတော်နှင့်နိုင်ငံသားအကြားဆက်ဆံရေး၊
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၏အာမခံသမ္မတ? ဟုတ်ကဲ့, ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအလိုအရဟုတ်ကဲ့! အခန်းကြီး4။ ရုရှားသမ္မတအပိုဒ် 80 1 ။ ရုရှားသမ္မတပြည်နယ်၏ဦးခေါင်းသည်။2။ ရုရှားသမ္မတ, ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများ၏အာမခံဖြစ်ပါတယ် ...
အရာကိစ္စများတွင်တွေကို RF နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏အမှုများကိုနိုင်ငံတော် Duma ပျော်ဖို့အခြေခံဥပဒေညာဘက်ရှိသနည်း ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်ကမူလအရင်းအမြစ်သုံးစွဲဖို့ သာ. ကောင်း၏။ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း 1 များ၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုရည်ညွှန်း။ နိုင်ငံတော် Duma ရုရှား၏နိုင်ငံတော်သမ္မတကဖျက်သိမ်းစေခြင်းငှါ ...
ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏ယုတ္တိနှင့်အထူး-ဥပဒေရေးရာအနက် p.4 st.15 ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ? ရုရှားဥပဒေများဟာနိုင်ငံတကာပညတ်တရား၏တစ်ကမ္ဘာလုံးအသိအမှတ်ပြုစံနှုန်းများဆန့်ကျင်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သူတို့မမှန်ကန်တဲ့ 1 ဖြစ်ကြသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် Int ၏အခြေခံမူများနှင့်စံချိန်စံညွှန်းအသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြသည်။ ညာဘက် ...
ခန့်အပ်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းကသမ္မတ၏ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းအပိုဒ် 83 RF ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနိုင်ငံတော်သမ္မတကဖန်ဆင်းသောအဘို့ရာထူးများ၏စာရင်းကို: က) ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏ပြည်နယ် Duma ၏သဘောတူခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူကိုခနျ့အပျ; ဆ) Duma ဖြစ်ပါတယ် ...
ဥပဒေပြုအာဏာကို။ ကျနော်တို့ကဖက်ဒရယ်ညီလာခံဖြစ်ပါတယ်ရှိသည်။ မေးခွန်းများကိုပါလိမ့်မည်ပင်အဘယျသို့?) ရုရှားဥပဒေပြုအာဏာကိုခုနှစ်တွင်ဒေသဆိုင်ရာ, ပြည်နယ် Duma နှင့်ဖက်ဒရေးရှင်းကောင်စီတို့ပါဝင်သည်သောလွှတ်တော်နှစ်ရပ်ဖက်ဒရယ်ညီလာခံအတွက်မရေဖြစ်ပါတယ် ...
ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာတရားရုံး၏လုပ်ပိုင်ခွင့်များ“ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာတရားရုံးဆိုင်ရာ” ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာဥပဒေပုဒ်မ ၁ - ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာတရားရုံးသည်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဆိုင်ရာတရားရေးအဖွဲ့ဖြစ်သည်။
ရုရှားဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအနုပညာတစ်ခုဆောင်းပါးအဘို့အအပိုဒ် 49 ။ အပြစ်ကင်းစင်၏ 49 ယူဆ; APC RF အနုပညာ။ အဆိုပါပြောဆိုချက်ကို၏အရွယ်အစား, တစ်ဦးအရေးဆိုမှု၏စွန့်လွှတ်, အရေးဆိုမှု၏အသိအမှတ်ပြုမှု, ကမ္ဘာပေါ်မှာအပြောင်းအလဲတစ်ခုခိုင်ခိုင်လုံလုံဒါမှမဟုတ်အရေးဆိုမှု၏ဘာသာရပ်ကိုပြောင်း 49 ...
အပိုဒ် ၂ အရရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၏ ၂၄ ကြိမ်မြောက်အပိုဒ်။ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၂၄ "ပြည်နယ်အာဏာပိုင်များနှင့်ဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များ၊ သူတို့၏အရာရှိများသည်စာရွက်စာတမ်းများနှင့်ပစ္စည်းများနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ရန်အခွင့်အလမ်းများပေးအပ်ရန်တာဝန်ရှိသည်။
တစ်ဦးချင်းစီတဦးချင်းရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်၏တစ်ဦးရှင်းပြချက်ရွေးကောက်ပွဲများ၏အဖွဲ့အစည်းနှင့်အမူအကျင့်၏ဥပဒေများအားဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်အတူရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်၏အဆင့်ဆင့်ကိုဖော်ပြရန်ရလိမ့်မည်။ ဒါဟာန်းကျင်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားတာဝန်များကိုကှာခွားထားတဲ့အတော်လေးလွတ်လပ်သောအဆင့်ဆင့်, ပါဝင်ပါသည် ...
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင်ရုရှားနိုင်ငံ၏ပြည်နယ်ပိုင်နက်ဖွဲ့စည်းပုံကိုမည်သို့ဖော်ပြထားသနည်း။ ငါကတကယ့်ကိုအံ့အားသင့်စရာကောင်းတဲ့ဖက်ဒရေးရှင်းလား။ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ခေါင်းစဉ်! အပိုဒ် ၁ ၁။ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း - ရုရှား ...
လူနှင့်နိုင်ငံသား၏အခွင့်အရေးများနှင့်လွတ်လပ်ခွင့်၏အဓိကအမျိုးအစားများ။ အဖြေကိုရှာတွေ့ငါ့ကိုကူညီပါ။ လူနှင့်နိုင်ငံသား၏ကိုယ်ရေး, လူမှုရေး, နိုင်ငံရေးနှင့်စီးပွားရေးအခွင့်အရေးများနှင့်လွတ်လပ်ခွင့်များကိုအခြေခံ (inalienable) သို့ခွဲခြားထားတယ်, အခြေခံ (ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ) နှင့်အသိအမှတ်ပြု ...
တစ်ဦးဝယ်စတိုးဆိုင်မှဆုကြေးဇူးကိုလက်မှတ်ပြန်လာနိုင်ခြင်းရှိမရှိ? ငွေသားအဘို့လက်မှတ်လဲလှယ်, ကံမကောင်းအလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ပေ။ လက်ဆောင်လက်မှတ်နှင့်ညီမျှကာငွေပမာဏရှိသူ၏ထုတ်ကုန်များ၏ဆောင်လုလင်သိရှိစေရန်အဖွဲ့အစည်းများ၏တာဝန်အတည်ပြုတဲ့စာရွက်စာတမ်းဖြစ်ပါတယ် ...
အဘယ်သူသည်အများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများကဖယ်ရှားခဲ့သည်။ အဲဒီအစား, သူတို့ oa ထင်ရှား။ , အဖွဲ့အစည်းကသူတို့တရားဝင်ဖောင်ပုံစံကိုကြားမှ၏တကယ်တော့တစ်ခုလွှမ်းမိုးသောနံပါတ်, ၎င်း၏အနှစ်သာရအတွက်အမြဲတစ်ဦးအများပိုင်ကုမ္ပဏီဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့ကမ ...
14 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,308 စက္ကန့်ကျော် Generate ။